mumhanzi — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Kuti uratidze mashoko ake, Trip akatora yakasiyana nzira pakunyora nguva ino kumativi. Pane kushandira pamwe vaburitsi yakawanda, Iye aishanda kuvinga yose Album pamwe kwenguva yakareba mugadziri Gawvi kwake Atlanta Studio. Sonically, Rise wokutanga kuroorwa “Shweet” anoratidza guru tarenda vose Gawvi uye Trip Lee. With kwayo kupupira kugadzirwa, penzira nods kuti ainakidza pasi rwezasi Houston dauka pamwe New York-Style KuMasiye. Trip kuti ndima kuramba hunotiyeuchidza sezvavari zvinokosha. Zvichakadaro, “Sweet Victory” anovaka kubva zvishoma ndima kupinda vachingotaurawo haka izvi pakarepo achisimbisa sezvo Trip kuti chirwere chokubuda rukabata. “Manolo” anomuona kamwe zvakare chikwata pamwe Reach Records’ pachake huru murume uye shamwari yepedyo Lecrae. pamwe chete, vaviri pafiripi imwe hudyu-hop paradigm noungwaru pakati zvakasimba dzakarukwa senhetembo mafayawekisi.
Album inotanga New Dreams, uine J.R. uye Sho Baraka, inova kuda chokwadi kuti kudzingana nokupesana achachengeta isu kubva upenyu hwakazara Mwari anoda kwatiri tose. Trip Anotevera akasununguka nziyo dzokurumbidza Robot ?? uye ndine Good uine Lecrae, izvo neunozvikudza rusununguko, Kugutsikana nokuchengeteka inowanikwa Kristu. On Fantasy ??, uine Suzy Rock, Trip nokungwarira rinofumura kurota nyika isu kana kurarama kana refu kuti uye rwaityisa zvichafambira kuva. Other collaborations pamwe KB, Andy Mineo, Jimmy Needham, V. Rose nevamwe vazhinji, vanopemberera kunaka upenyu chabva kuna emancipator wechokwadi, musiki uye muzivisi zvose zvakanaka. Nepo kugadzirwa kubva Dirty Rice, Alex Medina, G-Styles uye Joseph Prielozny anopa mbiri colour nokuda kugutsikana woupenyu munaKristu.
The Man Up Album, pavanoparidza Man Up pamushandirapamwe, anotsvaka kupindura mubvunzo iwoyo nokupira Shandurwa kuti sangano! Lecrae, Trip Lee, Sho Baraka, Tedashii, Pro, KB uye Andy Mineo vari kudana vanhu vari Hip-hop tsika kuti zvechokwadi chebhaibheri urume kungotaurwa neshoko: kutungamirira noushingi, kuramba passivity, kugamuchira mutoro uye kuvavarira kuzvininipisa, kuburikidza nokutendeuka nokutenda muna Kristu.
Trip Lee owana ane kazhinji zvakaoma, asi pakupedzisira vachivimbisa mamiriro–vakananga husingaperi, asi tasked kufamba kuburikidza iyeyu. Album ake wechitatu, Between Two Worlds inopa vateereri muunganidzwa Mafungiro pachako kuti kudzokorora mufaro nokutamburira isu ruzivo zvose sevatendi. Kuzarurwa njanji rokuremekedza, Real Life Music,?? muchidimbu chii kutarisira kubva Trip kuti Latest chirongwa.
Unoona naYe zvakajeka? Back ane yechipiri Disc, Trip Lee ari basa here kuona Mwari zvakajeka kuburikidza izvo cherugwaro, kukupai 20/20 kuona. uine incredible, siyana kugadzirwa, pamwe nevamwe zveNharireyomurindi Lecrae, Tedashii, Shai Linne, nevamwe.
Kana ivo Only Waiziva
Trip Lee Debut Album! Izvi vaduku unashamed nhengo 116 Clique akaradzika pasi dzimwe zvakakomba kupisa pamusoro “Kana ivo Only Waiziva”. Haudi vatadzewo uyu. Trip Lee anobata pamusoro savi dzakasiyana nyaya kuti nazvo kufamba kwako naKristu, kubva sei tinofanira kuongorora hwedu kuna vamwe dzidziso zvakakomba pamusoro 2nd munhu yoUtatu. Ivai nechokwadi kuti imi COP CD ichi uye kutsvakurudza mashoko acho. Makambonzwa Trip Lee pamusoro 116 Clique muunganidzwa Album zvino unogona kuwana chaicho ngaakuitirei rake rizere rokutanga kureba kusunungurwa pamwe kurimwa pachishandiswa Tony Stone, JR, Lecrae, uye zvakawanda, ndinoiitawo zvimwe kukuru Ambassador, Lecrae, Tedashii, Flame nevamwe!